Miresaka Fahamarinana: Feo Manohitra Ny Tsimatimanota · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2012 4:46 GMT
Tamin'ny 23 Novambra 2009, olona 58, anisan'izany ireo mpanao gazety 30 no nalaina an-keriny sy novonoina tamin'ny fomba feno habibiana raha niara-dia niaraka tamin'ireo mpanohana mpanao politika ao an-toerana. Nitranga tao amin'ny faritra Atsimon'i Maguindanao izany, ao Filipina. Araka ny filazan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao gazety (CPJ), zava-nitranga nahafaty olona be indrindra teo amin'ny tantaran'ny mpanao gazety izany.
Ho fahatsiarovana ny vono olona tao Maguindanao, amin'ity taona ity, ny 23 Novambra, nanambatra ny heriny ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy mpiaro ny fahalalaham-pitenenana amin'izao Andro Iraisam-pirenena Ho Fanafoanana Ny Tsimatimanota andiany faharoa izao, fampahatsiahivina isan-taona mikasika ny loza hatrehin'ireo mpanao gazety ankehitriny.
Anisan'ny mpandray anjara amin'izany ezaka izany ny Global Voices Advocacy ka nanatevin-daharana ny Miresaka Fahamarinana: Feo Manohitra Ny tsimatimanota karakarain'ny CPJ.
María Salazar-Ferro ao amin'ny CPJ, mpandrindra ny fanentanana, nanazava fa noho ny toe-javatra, lasa manam-pikasana hanao sivana ho an'ny tenany manokana (auto-censure) ny ankamaroan'ireo mpanao gazety monina ao amin'ny firenena isian'ny tsy fanasaziana ireo nahavita namono nahafaty ny namany: Hany ka “Misoroka resaka saropady izy ireo, ary tsy miraharaha izay tantara mety hampidi-doza.”
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fanentanana, tsidiho eto ny habaka ary manaova zavatra ho amin'izany androany!